लाखौं पैसा खाएर सिंगो बस्ती नै डुबाएर महिला फरार, पीडितहरुको यस्तो बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Samchar
लाखौं पैसा खाएर सिंगो बस्ती नै डुबाएर महिला फरार, पीडितहरुको यस्तो बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्)
August 17, 2021 453
सामान्यतया एउटै गाउमा बसोबास गरे पछि छरछिमेकी सग सार्‍हो गाह्रो पर्दा सर सहयोग लिएर आफ्नो समस्या टार्ने गरिन्छ, यसरी नै समाजमा बसिन्छ । तर कतिपयले भने झुटो समस्या देखाएर सहयोग माग्दै आफ्नो दुनो सोझ्याएर हिड्ने गरेका पनि छन ठाउँ ठाँउमा । त्यस्तै घट्ना अहिले घटेको छ । पीडितहरुको बिचल्नि बनाएर एक महिला फरार भएकी छिन । उनी सम्पर्क बिहिन भए पछि पीडितहरु मिडियामा आएका छन ।
उर्लाबारीकि रिंकु लिम्बू नाम गरेकी दुई छोरा कि आमा एक महिलेला आफ्नै छरछिमेकीहरुसँग अनेकौ समस्या देखाएर लाखौ रुपैयाँ कुम्ल्याएर अहिले बेपत्ता छिन । उनले आफ्ना छिमेकीहरु छ जना महिला र एक जना पुरुषबाट छ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ विभिन्न समस्या देखाएर केही दिन, केही महिनाका लागि भन्दै सापटी लिएर कसैलाइ थाहा नदिइ बसोबास गरेको ठाउँ छोडेर सम्पर्क बिहिन छिन ।
रिंकुले एकै आगन भएर बस्ने अमृता राईको एक लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्नको लागि भन्दै लिएको पिडित अमृताले बताइन । पैसा माग्न आउदा किस्ता तिर्न अभर परेको नतिरेमा आएर घर बाटै सरसामान लिएर जान्छ संस्थाले भन्दै रोइ कराइ गरिन तर अहिले हामिलाइ नै बिचल्नी बनाएर थाहै नपाइ हिडिन, पिडित महिला अमृताले भनिन । त्यस्तै ब्यथा सबिना शाक्यको पनि छ । सबिना गाउँमै सनोतिनो पसल चलाउथिन । फरार रिंकुले सम्पुर्ण घरायसी सामान सबिनाकै पसलबाट लाने गर्थिन । सबिनाको पसलको बाकी तीस हजार भन्दा धेरै छ रिंकुलाइ ।
त्यति मात्र हैन सबिनाबाट छोराछोरीको दुई वर्ष देखिको स्कुलको फि तिर्न बाकी रहेको, नतिरे परिक्षा दिन रोकिने भन्दै अन्य पैसा पनि मागेकी थिइन । सबिनाले उनलाई अन्य एक लाख रुपैयाँ पनि दिइन, रिंकी त्यो सब लिएर फरार भइन । त्यस्तै उर्लाबारीकै अर्कि छिमेकी मनु लिम्बूले पनि उनलाइ आफ्नी नन्दको सत्तरी हजार रुपैयाँ दिलाइ दिएकी थिइन । अहिले पैसा लिएको दुई वर्ष भन्दा धेरै भयो । त्यही हुदा त रिर्छ भन्ने थियो तर अहिले उनी फरार भए पछि नन्द सगँ सोही कुरामा झगडा भएको पिडित मनु बताउछिन ।
रिंकुले अर्कि छिमेकी भुमिका भण्डारि मार्फत सुन पसलबाट बिना धितो भुमिका कै नामबाट तीस हजार रुपैयाँ झिक्न लाएर लिएकी थिइन, साथै भुमिका बाट आठ हजार नगद पनि लिएकी थिइन । अहिले उक्त सुन पसलमा आफुले ब्याज सहित पचास हजार भन्दा धेरै तिरिसकेको पिडित भुमिका बताउछिन । यस्तै अर्कि छिमेकी यसोदा शाक्यकी सासूबाट पनि रिंकुले नगद एक लाख केही दिनलाई भन्दै लिएर गएको यसोदा बताउछिन ।
Prevयी ४ भारतिय कलाकार: जाे नेपाल भनेपछि ‘मरिहत्ते’ गर्छन
Nextसांसद वलीले र वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेतको गालामा किस गरेको तस्विर भाइरल ! कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ?
भाेलिदेखि शनिवारसम्म वर्षा र हिमपातकाे सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध